Nyein Chan Aye – အမုန်းကြီးသူ သို့ | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်ရစ် - အတိတ်ကို ပြန်မလှန်ကြေး (ခင်ညွန့်၊ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ အာဏာသိမ်းပြီးစ)
ကာတွန်း ATH ရဲ့ သေမင်းတမန်
ဥုံဖွ - "ဗိုက်​ပူ ဆိုသူတ​ယောက်​အ​ကြောင်း"
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မိုးပျံလမ်းတွေ ဖောက်တော့မှာပါ ...
ဌေးမင်းခိုင် ● ဂိမ်းစည်းမျဉ်းများပြောင်းလဲခြင်း
ငြိမ်းဝေ - လူတိုင်းအတွက် ဗသျှိုးရဲ့ လက်ဆောင် ဖားတကောင်
မောင်မောင်စိုး ● ပထမအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံအား သုံးသပ်ချက် - အပိုင်း (၇)
ဇင်လင်း - ဦးဥတ္တမထုံးကို နှလုံးမူကြစို့ ...
ဇေယျမင်းသျှင် ● လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ “ဖော်ကောင်” တဲ့
လင်းထင် - တိုးတက်သော အနုပညာဆိုတာ ဘာလဲ
Join 88,237 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month July 2018 (116) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ခရီးသွား ဆောင်းပါး (78)
K ငြိမ်းချမ်း (65)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (1,046)
Cartoon Box (3,518)
Nyein Chan Aye – အမုန်းကြီးသူ သို့
ငြိမ်းချမ်းအေး၊ မေ ၃၀၊ ၂၀၁၂
ခင်ဗျား ဟာ ခင်ဗျားနဲ့ တသွေမတိမ်း အလုံးစုံ မတူသူ အားလုံးကို မုန်းနေတယ်လို့ ထင်တယ်။ ခင်ဗျား ဟာ ခင်ဗျား တိုင်းပြည်ကို ချစ်တာထက်ပိုပြီး ခင်ဗျားနဲ့ သဘာဝအရ မတူနိုင်တဲ့ သူအားလုံးကို မုန်းနေတယ်။
ခင်ဗျား ဟာ လိင်တူ ချစ်သူတွေကို မုန်းတယ်။
နိုင်ငံခြားမှ လာရောက် အခြေချနေထိုင်သူတွေ၊
လူမည်းတွေ၊ အသွေးအရောင် ကွဲပြားသူတွေ၊
တရုတ်တွေ၊ အိန္ဒိယ အနွယ်တွေ၊ မူဆလင်တွေ၊
ဘာသာကွဲတွေ၊ ဘာသာရေး အရ ရှေးရိုးမစွဲ အမြင်မကျဉ်းမြောင်းသူတွေ၊
ဘာသာမဲ့တွေ၊ ဘုရားကို မယုံကြည်သူတွေ၊
မိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရွေးချယ်မှုအတွက် အခွင့်အရေးတောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊
အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး အတွက် တိုက်ပွဲ ဝင်နေသူတွေ၊
လိင်တူ ချစ်သူလက်ထပ်ခွင့် တောင်းဆိုနေသူတွေ၊
ဆင်းရဲသားတွေ … …. … ဒါတွေ အားလုံးကို ခင်ဗျား မုန်းနေတယ်။
ဘောလုံးသမား အီဗရာကို မန်ယူ အသင်းမှာ ကစားလို့၊ ပြင်သစ် အသင်းသားဖြစ်လို့ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ၊ သူရဲ့ အပေါ်ယံ အရေပြား အရောင်အသွေးကြောင့် ခင်ဗျာ မုန်းနေတယ်။
စကားတစ်လုံးတည်းနဲ့ ပြီးအောင် ပြောရရင် “လွတ်လပ်မျှတတဲ့ အတွေးအခေါ်” ဆိုတာကို ခင်ဗျား မုန်းနေတယ်။
ခင်ဗျား ဟာ ခင်ဗျားကို လူမျိုးရေးခွဲခြားတတ်သူလို့ ခေါ်ခံရရင်လည်း မုန်းတယ်။
ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ မတူမှု၊ ယုံကြည်မှု မတူမှုအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်သူလို့ ခေါ်ခံရရင်လည်း မုန်းတာပဲ။
လူမည်းတွေ၊ အသားအရောင်၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု စတဲ့ မတူကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနေသူတွေရဲ့ ဘဝအကြောင်းကို အရေးတယူ စာနာနားလည်စိတ်နဲ့ ပြောလာမယ်ဆိုရင်၊
သူတို့တတွေက မွေးစာရင်းတောင်းတဲ့ အချိန်၊ နိုင်ငံသားကဒ်ပြားတောင်းတဲ့အချိန် မှာ ဒီကောင်တွေ ထမင်းစားလက်မှတ်ရဖို့အတွက် ဒါတွေ တောင်းနေတာပါလို့ အလိုအလျောက် ကောက်ချက် မဆွဲတော့ဘူး ဆိုရင် …
ခင်ဗျားကို လူမျိုး၊ ဘာသာ အသားအရောင် ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်သူလို့ မခေါ်တော့ပါဘူး။
ခင်ဗျား ဟာ လူတွေအားလုံးက အတူတူပဲ၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်မှာ နေထိုင်နေသူအားလုံး တန်းတူ နိုင်ငံရဲ့ ဓန အပါအဝင် အရင်းအမြစ်တွေ အားလုံး ညီတူညီမျှ ခွဲဝေ သုံးစွဲစေရမယ် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်၊ လူမှု တရားမျှတမှုရှိရမယ် ဆိုတဲ့ လူမှုရေး အတွေးအခေါ်တွေကိုလည်း မုန်းနေတာပါပဲ။
ခင်ဗျား ဟာ ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အတွေးအခေါ် ပေါင်းစုံ ထွန်းကားမှုကို အားပေးတဲ့ ဗဟုဝါဒ ကိုလက်ခံသူ၊ အားပေးသူ နဲ့ အတွေးအခေါ် သမာသမတ်ကျ ပျော့ပြောင်းရမယ်လို့ ဆိုသူတွေ အားလုံးကိုလည်း မုန်းနေတယ်။
အစိုးရက နိုင်ငံရေးအလိုအရ ပုံဖော်ထားတဲ့ (Politically Manipulated) မှိုင်းတိုက်ထားသမျှ လူမျိုးကြီးဝါဒ၊ ပြင်းထန်တဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ၊ မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု အစွန်းရောက်၊ ပြင်းထန် ရှေးရိုးစွဲမှု စတဲ့ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လက်မခံသူ အားလုံးကို ခင်ဗျား မုန်းနေတယ်လို့ တိုတိုပြောနိုင်တယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ အတွေးအခေါ် နဲ့ လုပ်ရပ် ဟာ ကျနော့်ကို စိတ်ပျက်စေတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ အစွန်းရောက်တဲ့ အမုန်းတရားက ကျနော့်ကို ပျို့အန်စေတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ ယုံကြည်မှု မတူမှုအပေါ် ခွဲခြားချင်တဲ့ စိတ်၊ လက်မခံနိုင်တဲ့ သဘောထားက ကျနော့်ရဲ့ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို စော်ကားနေတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားတတ်မှုက ကျနော့်ကို တော်လှန်လိုစိတ်တွေ ဖြစ်စေတယ်။
အမုန်းကြီးသူကြီးရေ ခင်ဗျားရဲ့ မျိုးချစ်စစ်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ မေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ မုန်းနေတဲ့ ခင်ဗျား ရဲ့ အမုန်းတွေကို ရပ်တန်းက ရပ်လိုက်ပါ။
သဘာဝကျကျ မဟုတ်၊ သိပ္ပံနည်းမကျ၊ အကျိုးအကြောင်း မညီတဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်၊ ပြုမူဆက်ဆံမှုတွေကို ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးလုပ်နေတာ ကို ရပ်လိုက်ပါ။
ဒါတွေဟာ ရှက်ဖွယ်လိလိ အတွေးအခေါ်တွေ၊ အပြုအမူတွေ ဆိုတာကို နားလည်ပါ။ ဒါမျိုးတွေအတွက် ရှက်တတ်ပါ။
လက်တွေ့ သုံးစားမရတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးချင်းရဲ့ ဝိသေသတွေ၊ စရိုက်လက္ခဏာတွေ၊ တန်ဖိုးတွေ ထက် လူမှန်ရင် ရှိရမယ့် လူ့တန်ဖိုးတွေ၊ လူ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ လူလူချင်း စာနာထောက်ထားငဲ့ညှာမှုတွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ကို မပျောက်ပျက်အောင်၊ ရှင်သန်တိုးပွားအောင်လုပ်ပါ။
ခင်ဗျား အလေးထားတဲ့၊ ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာတရားတွေရဲ့ အဆုံးအမကလည်း လူလူချင်း ချစ်ဖို့ပဲ လမ်းညွှန်ပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ မတူတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးကို မုန်းရမယ်လို့ သွန်သင်ထားခြင်း မရှိပါ။
နေရာ ဒေသ၊ ပထဝီ၊ ရာသီဥတု၊ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု၊ အစဉ်အလာ မတူကွဲပြား ကွားခြားလို့ ဓလေ့ ထုံးစံတွေ၊ ရုပ်လက္ခဏာ အသွင်အပြင်၊ အစားအသောက်၊ အဝတ်အထည်၊ အသုံးအဆောင်တွေ မတူနိုင်ဖူးဆိုတာ သဘာဝပါ လို့ လက်ခံရပါမယ်။
သဘာဝအရ ရုပ်သွင်ပြင် ကွဲပြားမှုကို လူမျိုးခွဲမယ်ဆိုရင်တောင် ရှေးမနုဿဗေဒအယူအဆအရ မွန်ဂိုလွိုက် (အာရှ နဲ့ အမေရိက အင်ဒီးယန်း၊ လက်တင် ၊ လူဝါ ၊ လူနီ) ကော့ကဆွိုတ် (ဥရောပ လူဖြူ) ၊ သြစတြေလွိုက် (သြစတေးလျန် နဲ့ သမုဒ္ဒရာပိုင်း နေထိုင်သူ)၊ နီဂရွိုက် (အရှေ့ အာဖရိက လူမည်း) နဲ့ ကက်ပွိုတ် (တောင် အာဖရိက လူမည်း) စတဲ့ အုပ်စုအနေနဲ့ သာခွဲနိုင်တယ်။
ဒါလည်း ခုနောက်ပိုင်း အယူအဆတွေအရ လူမျိုးတွေ ဒီလို မနုဿဗေဒအရ အုပ်စု ခွဲတာဟာ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်တွေ၊ ယုံကြည်မှု တွေ အပေါ်သာ အခြေခံပြီး (subjective judgement) ၊ တနည်းအားဖြင့် လူမျိုးခွဲခြားချင်စိတ်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပြီး တကယ် မှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်ကို အခြေခံဖို့က သုတေသနတွေ အများကြီး ထပ်လုပ်ဖို့ လိုသေးတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။
နောက်ပိုင်း အသေးစိတ်အထိ ခွဲခြားစိတ်ဖြာလေ့လာနိုင်တဲ့ DNA နည်းပညာတွေ ဒီထက်ပိုပြီး တိုးတက်လာရင် လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးမှာ တည်ရှိနေတဲ့တဲ့ ဘုံတူညီမှုတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်လာမှာ ဖြစ်တယ်။
မလွဲဧကံ သေချာတစ်ခုကတော့ လူဟာ စဉ့်ကဲဖြစ်စဉ်အရ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး သွားလာနေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရာသီဥတုအရ အသွင်အပြင်၊ အသွေးအရောင်တွေ ကွဲပြားသွားတယ် ဆိုတာပါ။
ဒါကြောင့် “ကျုပ်ကတော့ ဘယ်တိုင်းပြည်၊ ဘယ်နိုင်ငံသား၊ ဘယ်လူမျိုး ဖြစ်တယ်” ဆိုတာထက် “လူအမျိုးအနွယ်၊ ‘လူ’ လူမျိုး၊ ကမ္ဘာနိုင်ငံသား ဖြစ်တယ်” ဆိုတာကို ဂုဏ်ယူပြီး သဘာဝအရ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိလို့ မတူကွဲပြားမှုတွေကို နားလည်လက်ခံ၊ ချစ်ခင်တတ်ပါစေ။
ကိုယ်နဲ့ သဘာဝအတူ အုပ်စု မဟုတ်တာနဲ့ မုန်းရမယ်၊ သတ်ရမယ် ဆိုတာ ကျောင်ခေတ်လူသားတွေ ရဲ့ စဉ်းစာပုံ နဲ့ ပြုမူပုံပါ။ (၂၁) ရာစုကို အချိန်ကာလ အားဖြင့် ရောက်နေသလို အသိဥာဏ်၊ ပညာ၊ အတွေးအခေါ်၊ စဉ်းစာပုံ၊ ပြုမူပုံ အားဖြင့်လည်း ရောက်အောင် ကြိုးစာပါ။ ကျင့်ကြံပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ ခင်ဗျားရဲ့ အမုန်းတွေ၊ ရက်စက်မှုတွေ၊ အစွန်းရောက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ အဆင်အခြင်မဲ့တဲ့ အပြုအမူတွေ၊ အတ္တကြီးမှုတွေ အတွက် ကျနော်ဟာ အံ့သြ၊ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်၊ ရှက်ရွံ့ ဖြစ်ရတာလွဲလို့ ခင်ဗျားကို ကျနော် မမုန်းပါဘူး ဆိုတာကို ပြောချင်တယ်။
ခင်ဗျား အမှန်ဘက်၊ အကောင်းဘက်၊ တရားမျှတမှုဘက်ကို တနေ့မှာ ပြောင်းလဲလာမှာပဲလို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ခင်ဗျားကို မမုန်းနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို အသိပေးချင်တယ်။
ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်းရဲ့ အမုန်းက ကျန်သူတွေ အားလုံးအတွက် လိုအပ်တာထက်ပိုနေပြီ ဖြစ်လို့ ဖြစ်တယ်။
၂၈ ၊ မေ ၊ ၂၀၁၂
မှတ်ချက်။ ။ အထက်က “ခင်ဗျား” ဟာ ခုစာဖတ်နေသူ မဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်တယ်..။ အချက်လက် တချို့မှာ ဖြစ်နိုင်နေရင်လည်း အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်နိုင်လိမ့်မယ်..၊ အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတယ်..၊ ကြိုးစားနေတယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်..။
ဝန်ခံချက်။ ။ Daily Kos မှာ “အမှန်တရား ဝန်ကြီးဌာန” ရေးတဲ့ “သူတို့ဟာ အမေရိကကို ချစ်တာထက် အိုဘားမားကို ပိုမုန်းတယ်” ဆိုတဲ့ စာကို ဖတ်ပြီး ဒီစာရေးဖို့ စိတ်ကူးရတယ်..။ စကားလုံး တချို့ကိုလည်း မှီးတယ်..။
One Response to Nyein Chan Aye – အမုန်းကြီးသူ သို့
mgoogyaw on May 30, 2012 at 3:10 pm
Whatalovely poetry. It shows all the true feelings of some person,which had in their mind.My point of view, is,this poetry means,directly to the power crazy Junta’s, Generals and their followers.They did’nt notice or may be they did’nt knows,that “The World is changing,and we,all are now,in 2012. They are still dreaming,to control,every thing,they had earned.And, they have no knowledge and brains,till now.Every thing they still thinking Stupidly,and awkwardly.
ကာတွန်း လူကိုနော်ရဲ့ ခုလည်း သူတလူ ငါတမင်းပါပဲ … https://t.co/lWSfXA58ws https://t.co/ZUPyFJK3eh about 35 minutes ago ReplyRetweetFavorite
မင်းကိုနိုင် ● ကော်လီနာရဲ့ ခရာသံ https://t.co/RmjLigD7La https://t.co/YGSpmlJ2xO about2hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၄၅) https://t.co/fnryjGzbrh https://t.co/rYH75fahpk about3hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မိုးပျံလမ်းတွေ ဖောက်တော့မှာပါ … https://t.co/LLn2HPVrw9 https://t.co/0Vs7FZLPXk about3hours ago ReplyRetweetFavorite
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) – ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – ပထမအဆင့် https://t.co/j5yl0DvREo https://t.co/yGLKjKzbBk about7hours ago ReplyRetweetFavorite